साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड शनिवारदेखि ५८औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । तत्कालीन समयमा नेपालमा नूनको स्रोत नभएका कारण र तत्कालीन अवस्थामा यातायातको दृष्टिकोणले समेत नून आपूर्ति चुनौतीपूर्ण रहेको थियो । त्यसैले, अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्न त्यतिबेला नूनको कारोबारमा लागेका मुख्य व्यापारीहरूलाई समावेश गरी सरकारले यस कम्पनीको स्थापना गरेको थियो । शुरूमा नूनको मात्र कारोबार गरेको कम्पनीले आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ । कोरोना महामारीमा आमउपभोक्तालाई आवश्यक वस्तुहरू घरघरमै गएर उपलब्ध गराइरहेको छ । कर्पाेरेशनको वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं कम्पनीमा स्थापनाकालदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ । अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छ । यो ५८ वर्षको यात्रालाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?
२०२० भदौ २७ गते यो कर्पाेरेशनको स्थापना भएको हो । तत्कालीन समयमा आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय नून उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप नै यसको स्थापना गरिएको हो । तत्कालीन सरकारले मसहित निजीक्षेत्रका मुख्य सात व्यापारीहरूलाई शेयर हाल्न लगाएर यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने हामीलाई जबरजस्ती नै शेयर हाल्न लगाइएको थियो । त्यसपछि हामी निजीक्षेत्रका व्यवसायीरले शुरूमा प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँका दरमा शेयर हालेका थियौं । पछि थप लगानी आवश्यक देखिएपछि हामीले थप २५ हजार रुपैयाँ शेयर थप गरेका थियौं ।
यसरी कम्पनी स्थापना भएपछि शुरुआती चरणमा नूनको मात्र कारोबार गरेका थियौं । पहिला नेपाली बजारमा पाइने नून गुणस्तरीय नभएपछि गुणस्तरीय नून उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नै यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि हामीले सोही अनुरूप नै आयोडिनयुक्त नून उपभोक्तामाझ पुर्‍याउन थाल्यौं । विशेषगरी आयोडिन युक्त नून विक्री गर्दा नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो ठूलो सहयोग पुगेको छ । पहिला आयोडिनको कमीका कारण ५५ प्रतिशतभन्दा बढी बच्चाहरूमा गलगाँडको समस्या थियो । तर, आयोडिनयुक्त नून विक्री गर्न थालेपछि त्यो क्रमशः घट्दै गएर अहिले शून्य अवस्थामा आएको छ । यसमा मुख्य योगदान नै हाम्रो हो ।
नूनपछि हामीले आफ्नो सेवालाई थप विस्तार गर्दै पनि गयौं । हालसम्म आउँदा हामीले घ्यू, खाने तेल, ग्यास, रासायनिक मल लगायत सामग्री विक्रीवितरण गर्दै आएका छौं ।
यस्तै, औद्योगिकीकरणमा पनि हाम्रो उत्तिकै सहयोग पुगेको छ । हामीले विस्तारै आफ्नो मुख्य लगानीमा गोरखकाली रबर उद्योग, नपालकै प्रथम खाद्य उद्योग, नेपाल वनस्पति घ्यू उद्योग, हिमालय खाद्य एवं प्याकिङ उद्योग, नेशनल फाइनान्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स जस्ता संस्थाहरू पनि स्थापना गर्दै गयौं । यसरी हामीले औद्योगिकीकरण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि काम गर्‍यौं ।
समग्रमा हालसम्म आउँदा कम्पनीले ठूलो उतारचढाव पनि पार गरेको छ । कुनै समयमा कम्पनी नोक्सानमा पनि गयो । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले कुनै सहयोग गरेन । यद्यपि, कम्पनीलाई यो स्थानमा ल्याउन सकिएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा संस्थाको ५८ वर्षको लामो यात्रा उपलब्धिमूलक छ ।
अहिले कोरोना महामारीका कारण व्यापार क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । यो अवस्थामा साल्ट कम्पनीको व्यापार अवस्था कस्तो ? यो महामारीमा आफ्नो सेवा कसरी प्रदान गर्दै आउनु भएको छ ?
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हाम्रो व्यापारमा पनि असर पुगेको छ । अहिले सहज रूपमा गाडी नचल्दा समस्या भएको छ । होटेलहरू तथा रेष्टुराँ पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् । त्यस अनुसार खाद्य लगायत वस्तुको खपत घटेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो व्यापारमा पनि असर परेको छ ।
तर, यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो सेवालाई सुरक्षित रूपमा प्रदान गर्दै आएका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा ६ ठाउँमा विक्री केन्द्र नै राखेर अत्यावश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएका छौं । उपत्यकाका सतुंगल, कालिमाटी, कोटेश्वर, भक्तपुर र कलंकीमा विक्री कक्ष राखिएको छ । यस्तै, चारओटा मोबाइल भ्यानबाट उपत्यकाभर आम उपभोक्ताको घरघरमै सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौं । समग्रमा गुणस्तरीय सामान नै विक्री गरौं भन्ने मूल मर्मका साथ यो महामारीमा काम गरिरहेका छौं ।
यद्यपि, हामीले पछिल्लो समय नूनको कारोबारमा नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । विशेषगरी प्याकिङ गर्दा लाग्ने कागज लगायत सामग्रीको मूल्य बढेको छ । तर, नूनको मूल्य अझै स्थिर छ । साथै, दुर्गम ठाउँमा आफ्नै अनुदानमा नून विक्री गर्दै आएका छौं । यी र यस्ता कारण अहिले नूनको कारोबारमा नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । साथै, भूकम्पको समयमा सरकारले जस्तापाता ल्याउन लगाएकाले आपूर्ति गर्‍यौं । तर, त्यो अझै सरकारले किनेको छैन । यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अहिले आम किसानले सहज रूपमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । मल आयात गर्ने जिम्मा पाएका अन्य निकायले पनि अझै मल ल्याउन सकेका छैनन् । तर, तपाईंहरूले मल आयात गरेर आम किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आउनु भएको छ । अबका दिनमा पनि यसरी नै मल आयात गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ ?
कोरोनाको महामारीले गर्दामा मल आयात गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउने विषयमा चुनौती नै छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ । गत आवमा हामीलाई १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन भनिएको थियो । त्यसमा १ लाख २२ हजार ५०० मेट्रीक टन मल गत आवमै आएको थियो । बाँकी मल भने हालै ल्याएका छौं । यस्तै, चालू आवमा पनि ११ हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेका छौं । साथै, थप मल ल्याउन पनि आवश्यक पहल भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको लाभांश साधारणसभाबाट समेत पारित भइसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले अझै स्वीकृति दिएको छैन । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
सरकारले उक्त लाभांश किन रोक्यो हामी आश्चर्यमा परेका छौं । साधारणसभाबाट पारित भइसकेको लाभांश अझैसम्म हामीले पाउन नसक्नु दुःखद कुरा हो । लगानीकर्ताको समस्या र मागलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले लाभांश वितरणका लागि कम्पनीलाई यथाशीघ्र स्वीकृति दिनुपर्छ ।
शनिवार कर्पाेरेशनको ५८औं वार्षिकोत्सव छ । यसपटकको वार्षिकोत्सव के कसरी मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
पहिलाका वर्षमा भव्य रूपमै वार्षिक उत्सव मनाउने गरेका थियौं । तर, यो वर्ष कोरोना महामारीले त्यो सम्भव देखिएन । यो वर्ष त्यस्तो विशेष कार्यक्रम हुँदैन । कालीमाटीस्थित कार्यालयमै सञ्चालक र कर्मचारीहरूबीच सामान्य कार्यक्रम गरिन्छ । त्यसमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
कम्पनीका अबका व्यावसायिक आयोजना के के छन् ? सरकारबाट के कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
आगामी समयका लागि नयाँ व्यावसायिक योजना केही छैन । सरकारले सहयोग गर्‍यो भने कृषिक्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । नभए अहिले भइरहेका सेवालाई नै थप गुणस्तरीय र भरपर्दाे बनाउने योजनामा छौं ।
यस्तै, सरकारको सहयोगको विषयमा भन्नुपर्दा हामीले सरकारबाट नीतिगत भन्दा पनि व्यवसायको अपेक्षा गरेका छौं । सरकारले व्यवसाय दिने हो भने संस्थालाई थप बलियो रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । साथै, लाभांश वितरणमा पनि सहज नीति ल्याउनु पर्छ । सरकारले प्राविधिक रूपमा पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
भूकम्पको समयमा सरकारले भने अनुसार नै जस्तापाता ल्यायौं । तर, अहिलेसम्म त्यो जस्तापाता सरकारले किनेको छैन । महँगो मूल्यमा तिरेर ल्याइएको ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको जस्तापाता अझै अलपत्र छ । साथै, २ वर्षअघि चिनी ल्याउन भनेर ल्याइयो । तर, पछि सरकारले नै रोकिदियो । परिणामस्वरूप हामीले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । सरकारले यस्ता व्यावहारिक समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
कोभिड महामारीपछि औपचारिक क्षेत्रको दुग्ध व्यवसाय १० प्रतिशतमा झरेको छ[२०७७ मंसिर, १२]
बजेटमा ‘असारे प्रवृत्ति’ अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो प्रयास छ[२०७७ मंसिर, १०]